Kanal cusub oo digital ah - loogu talogalay dadka 60 ka weyn - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kanal cusub oo digital ah - loogu talogalay dadka 60 ka weyn
La daabacay måndag 30 maj 2016 kl 15.42
p4 plus kanal cusub
sawir: Katarina Larsson/Sveriges Radio.
Idaacadda Sveriges Radio ayaa maanta hirgelisay kanal cusub oo ah digital ah. Kanal oo magaciisa yahay P4 plus ayaa loogu talogalay dadka da’dooda ka sarayso 60+, iyadoo bilowga hore ee kanalkan waxa laga maqlayo ay u badnaan doonaan heeso iyo musik.
Lill Lindfors ayaa ka mid ahaan doonta fanaaniita heesahooda laga maqli doono kanalkan cusub ee P4 plus. Iyadoo musik laga siideyn doono ay u badnaan doonaan heesahii laga qaadey 50-meeyadii, 60-meeyadiii iyo waxii ka dembeeyey. Musikada kanalkan laga shidi doono ayaa isku jri doona heeso laga qaadey Sweden iyo heeso weliba waddanka dibaddiisa laga qaadey. Kanal cusub ayaa dhagystiyaasha loogu talogalay waxay ahaan doonaa dadka da’dooda ka sareyso 60+ kuwaas oo ah afar meelood dadka Sweden. Dhageysiyaasha aragtidoodana waa muhim si kanalkan loo hormariyo sida uu yeri Leif Eriksson oo ah hormoodka mashruuca kanalkan cusub lagu tijaabinayo.
- Kanalkan cusub waxaa la socon doona xog uruurin si aan u ogaano aragtida dhageysiyaasheena iyo waxay ka helaan, iyadoo ujeedada tahay in kanalkan lagu horumariyo aragtida dhageystiyaasha.
Dhageystiyaasha ayaa dalabanaya in kanalkan barnaamijyadiisa ay soo jeediyaan barnaamij jeediyaal la yaqaano oo caan ah. Taas dhawaan la sameyn doono, sida uu sheegay Leif Eriksson.
- Dadka waxay dalbanayaan barnaamij daadihiyaal ay ka mid yahiin Lisa Syrén iyo Ulf Elfvin, waxaan shaacin karnaa in ay sidaas noqon doonto oo an hadda ka shaqeyneyno, ayuu yeri.
Waxaa rajada tahay in marba marka ka deybeysa la kordhiyo barnaamijyada ka baxa kanal-kan P4 plus, iyadoo warar gaaban xataa lagu soo dari doono barnaamiyada, sidoo kalena waxaa laga maqli doono barnaamijyo qadiimi ah oo laga soo saari doono keyd-ka idaacadda.
- Sveriges radio waxuu leeyahay keyd cajiib ah halkas oo ay ku keydsanyahiin musik iyo heeso horey loo sameeyey, heesahas oo qaarkood qaadeen fanaanin dhageystiyaashu, ayuu yeri, intasna raaciyey in barnaamij baxay sommarkii 1962 ay suurogal tahay dhawaan idaacaddan cusub laga sii daayo.